Pokemon Go catapults Nintendo ahịa uru | Akụkọ akụrụngwa
Pokemon Go catapults Nintendo ahịa uru
Anyị na-aga n'ihu na Pokémon Go fever, ọ bụ na ọbụnadị Nintendo enweghị ike iche n'echiche otu egwuregwu ahụ ga-esi nyefee akwụkwọ ikike ha na Niantic maka egwuregwu vidio dị elu nke nwere ụwa nwere obi abụọ. N'otu ụzọ ahụ na ha amaghị etu ha ga-esi hụ obere ahịa Wii U. Egwuregwu ahụ aghọwo ihe ikpo okwu na ndị ọrụ na-arụsi ọrụ ike kwa ụbọchị na akụkọ ihe mere eme nke gburugburu ebe obibi na-eme ka ọnụ ahịa Nintendo bara uru n'ahịa. Ha na-arịgo n'ahịa ahịa, n'otu oge ahụ ka a na-ahapụ egwuregwu ahụ n'ọtụtụ nke mba ndị ka ukwuu.
N'oge ụnyaahụ ego afọ, uru ahịa nke Nintendo laghachiri ọzọ 14%, a na-apụghị igbochi ya, ọ bụ ụlọ ọrụ ugbu a ahụla ka mbak ya na-ebelata ihe kachasị obere n'oge a, nke enwere ike ịghọta dị ka nzọ dị mma. Maka ugbu a, ọnụ ahịa ahịa nke ụlọ ọrụ ahụ agbaala okpukpu abụọ, na-eru ijeri $ 42.000 naanị izu ole na ole ka ahapụchara egwuregwu ahụ. Ugbu a, Pokémon Go dị na mba 35 n'etiti Europe, Canada na United States, yabụ a ka nwere ọtụtụ ihe inyocha, anyị chere na uru ahụ ga-abawanye karịa.
Nintendo emeela ka ọnụ ahịa ya dịkwuo elu site na 100% kemgbe July 6, ihe dị mkpa na ụlọ ọrụ nke ọtụtụ n'ime anyị hụrụ na doldrums. Ọzọkwa, Ewebata ọhụrụ NES Omuma Obere rutere na Christmas, Site na egwuregwu iri atọ site na Nintendo Entertaniment System na usoro dị egwu, anyị ga-ekpori ndụ oge egwu. O yiri ka Nintendo amalitela ịmaliteghachi isi ya, ka ọ dị ugbu a, anyị na-echere maka akụkọ banyere Nintendo NX, karịsịa ugbu a na PS30 Neo na Xbox One S na-akwado ya kpamkpam ma na-atụ anya na etiti afọ na-esote.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Pokemon Go catapults Nintendo ahịa uru
A ga-enye Redmi Pro na July 27